Inkqubo yasePhanada yeziPhulo eKhanada
Urhulumente wesigqeba ngokuyinhloko uxanduva lolawulo lwemipu kunye nokulawulwa kwezibhamu eCanada.
Umthetho ofaka izibhamu kunye nokulawulwa kompu eCanada uquke kakhulu kwiCandelo II leCandelo loPhulo - mthetho waseCanada kunye nemimiselo ehambelana nayo, kunye noMthetho weMipuphu kunye nemimiselo ehambelanayo.
Inkqubo yasePhanada yeziPhulo zeziPhulo (iCFP), inxalenye ye-Royal Canadian Mounted Police (i-RCMP), inoxanduva lokulawulwa kweMithetho yokuPhuloza ephethe iifayili, ukuthutha, ukusetyenziswa nokugcinwa kwemipu eKhanada.
I-CFP ilawula ilayisenisi yabantu kwaye igcina i-database yelizwe yezirekhodi zomlilo.
Imithetho eyongezelelweyo nemimiselo iphinda isebenze kumgangatho wephondo okanye kamasipala karhulumente. Imimiselo yokuzingela ngumzekelo omhle.
Iiklasi zeGuns eCanada
Kukho iindidi ezintathu zezibhamu eCanada: engekho umda, inqatshelwe kwaye ingavunyelwe.
Izixhobo zemipuphe yaseKhanada zihlukanisa ezinye izixhobo ngezixhobo zabo zomzimba, ezifana nobude bombhobho okanye uhlobo lwesenzo, kunye nabanye ngokwenza kunye nemodeli.
Izibhamu ezingenakunqandeka (izibhamu ezide) zizibhamu kunye nezibhamu, nangona kukho ezinye izinto ezingekho phantsi kwazo ezichazwe njengeemipulelo.
Ukufumana iinkcukacha ezithe vetshe, jonga iziPhulo eziPheleleyo kunye neziPhulo eziVimbelekileyo ezivela kwiNkqubo yeziPhulo zaseKhanada.
Izibhamu zeeFayili eCanada
ECanada, ukuze uzuze, ube nerejista kwaye ubhalise isibhamu kwaye ufumane izixhobo kuwo, kufuneka ukuba ube nelayisensi, ekufuneka igcinwe ngoku.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeelayisensi zemvume:
I-Possession and License License (PAL):
Le layisensi ikuvumela ukuba ufumane okanye ufake ngokungapheli isibhamu. Kuhlaziywa rhoqo kwiminyaka emihlanu. Ngokubanzi, abafakizicelo kufuneka badlule kwiKolosi yoKhuseleko lokuPhusela iMipu yeKhanada.
I-Possession kuphela ilayisenisi (i-POL):
Le layisensi ivumela umnikazi weempi ukuba abe nemibutho ebhalisiwe, kubandakanywa nemikhosi ebolekwe nayiphi na iklasi ebekwe yilayisenisi. Kusebenza iminyaka emihlanu.
Uyabona: Ukufaka isicelo seLayisense yeNdawo kuphela
Ngeli layisenisi, abancinci abaneminyaka eli-12 ukuya kwe-17 bavunyelwe ukuboleka isibhamu esingenakunqandwa okanye isibhamu ngenxa yezizathu ezivunyiweyo ezifana nokuzingela. Abafaki zicelo kufuneka bawudlulise iNkundla yezokuThuthukiswa kweziPhulo zaseKhanada.
Kwabahlali abahlali kwiNyaka eyi-18 kunye nabadala
Abangewona abahlali abangaphezu kwe-18 bangabonisa isaziso esipheleleyo kodwa esingabhalwanga Isibhengezo seMibhobho yeziThuthi (bona iiFomu zabangewona izakhamuzi kwigosa lezithethe kwiziko lokuqala lokungena eCanada.) Xa isibhengezo siqinisekiswa yigosa lezithethe liya kuba Ilayisenisi yesikhashana yeentsuku ezingama-60.
Le layisensi ivumela ishishini ukuba liqhubeke nemisebenzi echazwe kwilayisenisi.
Registry Regus eCanada
IRejista yeParnafri yaseCanada iqulethe ulwazi kuzo zonke izibhamu ezibhalisiweyo kunye nabanikazi belayisensi yezibhamu. Amagosa aseburhulumenteni angabheka irejista ngaphambi kokuya kwifowuni, i-registry okwangoku ifikelelwe ngaphezu kwama-14,000 ngamaxesha.
Okwangoku, zonke iiklasi ezintathu zezibhamu kufuneka zibhaliswe. Nangona umgaqo wokuphelisa ukubhaliswa kwezibhamu kudala , ayizange ifumane i- Royal Assent kwaye ingasebenzi.
Ngaphambi kokuba ubhalise isibhamu, kufuneka ube nemibutho evumelekileyo yokuFakela kunye neLungelo lokuFumana (PAL). Kwakhona, izibhamu ngamnye kufuneka zibe nesiqinisekiso.
Ukuba unelayisenisi, unokufaka isicelo sokubhalisa izixhobo zakho kwi-intanethi.
Ukufumana ulwazi oluninzi malunga nokubhalisa isibhamu eCanada, funda ukubhaliswa kweMibhobho - Imibuzo ebuzwa rhoqo.
Ukufaneleka ukufaka isicelo se-Possession and Acquisition License (i-PAL) kufuneka bafake iinkcukacha ezibhaliweyo nezifanelekileyo kwiCanada yoKhuseleko lweMiphulo yeCanada (CFSC), okanye umngeni kwaye baphumelele iimvavanyo zeCFSC ngaphandle kokuthatha ikhosi.
Ukhuseleko olukhuselekileyo, ukuThuthwa kunye nokuBoniswa kweeMvuna
Kukho nemimiselo eKhanada yokugcina indawo, ukuthutha, kunye nokubonisa izixhobo zokukhusela ukulahlekelwa, ukweba, kunye neengozi. Jonga Ukugcina, Ukuthutha nokuBonisa iifomarha kwiphepha le-Firearms Programme.
Amandla eMagazini amakhulu
Ngaphantsi kwemiGaqo yeeNkqubo zoLwaphulo-mthetho, amaphephancwadi athile aphezulu okukhusela amanyathelo ayavunyelwa ukusebenzisa kuwo nawuphi na umgangatho wesibhamu.
Njengomgaqo oqhelekileyo, umthamo omkhulu wamaphephancwadi ngu:
5 iikharriji ezininzi zamaphephancwadi ezenzelwe ukusetyenziswa kwiziko elizenzekelayo-zomlilo izibhamu ezininzi; okanye
Ezili-10 zeekhodiji zeemagazini ezininzi.
Iimagazini zamandla aphezulu eziye zatshintshiswa ngonaphakade ukuze zingabambeli ngaphezu kwenani leekleyridges ezivunyelwe ngumthetho zivunyelwe. Izindlela ezamkelekileyo zokuguqula amaphephandaba zichazwe kwimimiselo.
Okwangoku akukho mda kumaphephancwadi wamandla omnxeba omlilo ohamba ngokuzenzekelayo, okanye ezinye izibhamu ezininzi ezingezona zizenzekelayo, kunye nezinye izinto.
Kuthiwani Ngeentsimbi kunye neeNqamlezo?
Iziphambano ezinokuthi zijoliswe kwaye zikhutshwe ngesandla esinye kwaye ziwela ngaphantsi kwama-500 mm ubude bume zivumelekile kwaye azivumelekanga ngokusemthethweni okanye zifumaneke ngokomthetho.
Akukho ilayisenisi okanye isitifiketi sokubhalisa sifunelwe ukuba sinakho nayiphi na enye isaphetha okanye i-crossbow efuna ukusetyenziswa kwezandla zombini kunye nobude ngaphezu kwe-500 mm ubude obude. Izibonelelo kwiCandelo loPhulo lwaMthetho oPhulo mthetho oPhulo mthetho oPhulo mthetho oPhulo mthetho oPhulo mthetho oPhulo mthetho.
Qaphela ukuba amanye amaphondo akavumeli ukuba iinqamlezo zisebenzise ukuzingela. Abantu abacwangcisayo ukusebenzisa naluphi na uhlobo lwesaphetha okanye i-crossbow yokuzingela kufuneka bahlole imimiselo yokuzingela iphondo malunga nolwazi lwelayisenisi yokuzingela kunye nezithintelo ezingasetyenziswa ekusebenziseni izindebe.
Iilwimi zesiTaliyane: I-Trasferire
Iisiseko zeRekhoda zaseKhaya
Indlela yokudala nokusebenzisa izixhobo kwiSiboniso esiSiseko 6
I-US Environmental Protection Agency (EPA)